Somaliland: Isbadalo lagu sameeyay dowladda - BBC Somali
Somaliland: Isbadalo lagu sameeyay dowladda
Image caption Wasiirkii hore ee maaliyada Cabdicasiis Maxamed Samaale.
Madaxweynaha Soomaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa xilka ka qaaday qaar ka mid ah wasiiradiisa iyo taliyaasha ciidamada, isagoo isku beddel ballaadhan ku sameeyay wasiirada qaar, wasiir ku xigeenada iyo agaasimayaasha guud.
madaxweyne Axmed siilaanyo wuxuu xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiirkii wasaaradda biyaha
Xuseen Axmed Cabdulle, wasiirkii wasaarada shaqada iyo Arrimaha bulshada Maxamuud axmed Barre Garaad, wasiiru-dawlihii wasaaradda xanaanada xoolaha cabdiraxmaan jaamac cabdulle, taliyihii ciidanka badda Axmed aw Cismaan, abaanduulihii ciidanka milleteriga general Cabdillaahi Xaaji Jaamac Calas, iyo gudoomiyihii hay'adda shaqaalaha dawlada Nuux Sh. Muse Ducaale.
Wuxuu madaxweynaha Soomaliland isku beddel ballaadhan ku sameeyay oo wasaaradihii u kala bedelay qaar ka mid ah wasiirada, wasiir xigeenada, iyo agaasimayaasha guud.
Tusaale ahaan wasiirkii wasaaradda maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Samaale waxaa laga dhigay wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada, halka wasiirkii waxabarashadana ZamZam Cabdi Adam laga dhigay wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda.
Cabdicasiis Maxamed Samaale ayaa iska casilay xilkiisa cusub iscasilay isagoo sheegay inaan lagala tashan.